बैंकहरूले अचाक्ली कमाएकै हुन् त ? | आर्थिक अभियान
बैंकहरूले अचाक्ली कमाएकै हुन् त ?
२०७८ फागुन, १९
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै मुनाफा कमाएको भनेर विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय विज्ञले त अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला बैंकले नाफालाई मात्र हेर्न नहुने कुरा समेत बताए । निजी बैंकका लगानीकर्ताले मुनाफाको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । यो स्वाभाविक हो । तर, चर्चा भएजस्तै बैंकहरूले अत्यधिक मुनाफा कमाएको चाहिँ होइन । निजीक्षेत्रका संस्थामध्ये बैंक सबैभन्दा बढी पारदर्शी संस्था हो । सुशासन पनि यहीँ बढी छ । तर, यही क्षेत्रमाथि आक्रमण पनि बढी भइरहेको छ । यो त्यति उचित देखिँदैन ।
बैंकहरूले असामान्य अवस्थामा पनि सामान्य अवस्थामा कमाए भनेर आलोचना हुने गरेको हो । बैंकमा ठूलो शेयर पूँजी छ, कोर क्यापिटल धेरै छ । बिजनेश ठूलो छ । पूँजी र बिजनेशको तुलनामा नाफा कम छ । उद्योग, व्यापार वा अन्य सेवाक्षेत्रले गरेको नाफाको तुलनामा बैंकको नाफा कम छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल अरू क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा कम छ । तर, हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा बैंकहरूले कमायो भनेर निकै नकरात्मक रूपमा किन टिप्पणी भइरहेको छ बुझ्न कठिन छ ।
बैंकहरूले भन्दा उद्योग, व्यापार र सेवाका अरू क्षेत्रले बढी नाफा गरेको देखिन्छ । युनिलिभर, डाबर, सूर्य नेपाल, एनसेल, गोर्खा बु्रअरीलगायत कम्पनीको लाभांश बैंकहरूको तुलनामा बढी छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीले भन्दा बढी सरकारी कम्पनीले मुनाफा लिइरहेको समेत पाइन्छ । किनेको भन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा बेचेर पनि आयल निगम घाटामा छ । सरकारका अन्य सेवा पनि महँगा छन् तर तिनका बारेमा त्यति ठूलो विरोध भएको पाइँदैन । अमेरिकामा कसैले पैसा कमायो भने अरूले रिस गर्दैनन् । जापानमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । तर, नेपालमा भने अरूले बढी कमायो भनेर विरोध गरिन्छ । सरकारले मनपरी कर उठाएको बारेमा भने कमै आवाज उठाइन्छ । वास्तवमा निजीक्षेत्रप्रतिको सोच नै नकारात्मक पाइन्छ ।
केही वर्षअघि बैंकहरूको कमाइ राम्रो थियो । उनीहरूले मुनाफा पनि राम्रो बाँड्थे । तर, अहिले उनीहरू पूँजीभारले थिचिएका छन् । ठूला भनिएका बैंकले पनि २५ प्रतिशत बोनस खुवाउन नसक्ने अवस्था छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी अन्य कम्पनीको भन्दा कम भएकाले बैंकको शेयर मूल्य पनि निकै तल आएको छ । त्यसैले बैंकले बढी कमायो भनेर आरोप लगाउनुभन्दा यसले अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान हेरिनुपर्छ ।